Kedu kilomita ole bụ 8848? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > 8848 mita na kilomita - nkọwa zuru ezu
8848 mita na kilomita - nkọwa zuru ezu
Kedu kilomita ole bụ 8848?
Ntughari nke a8,848mita kaPuku kwuru pukuagbakọọla site na ịba ụba8,848mita site 0,0006 na nsonaazụ ya bụ 5.4978Puku kwuru puku.
Oké osimiri bụ n'ezie, miri emi, dị omimi karịa ọtụtụ n'ime anyị maara. Ọ bụrụ na ị kpụọ ala ahụ dum site na elu elu kọntinenti ọ bụla na agwaetiti dị n ’ụwa, wee jupụta n’ala ala mmiri kachasị omimi nke oke osimiri na ala a, mgbe ahụ oke osimiri ga-ekpuzu ụwa niile dị kilomita abụọ. Ma, ụzọ atọ n’ime ụwa anyị a jupụtara na mmiri, ọ gbatikwara ebe dị omimi karịa naanị kilomita abụọ.
Ka anyị jiri echiche nke oke. Nke a bụ nha nke otu onye nkezi. Ebe a toro ibu karị nha elephant.
Ma nke a bụ nnukwu ụgbọ mmiri a rụtụrụla, nke Knock Nevis. N'iburu nke ahụ n'uche, ka anyị bido ịbanye n'ime mmiri wee hụ ihe anyị chọpụtara. Ihe mbu emere bu mita 40 n’okpuru ala, nke bu omimi kachasiri elu maka ugba mmiri.
Obere n'ihu, na mita 93, achọpụtara mkpọmkpọ ebe nke Lusitania, nke bụ ihe na-atọ ụtọ n'ihi na Lusitania n'onwe ya dị mita 240, nke pụtara na ọ mikpuru n'ime mmiri karịa mgbe ụgbọ mmiri nọ n'azụ ya ma ọ bụ ụta Ọ bụrụ ị kpachara anya maka ọrịa decompression, akwụsịla otu nwoke aha ya bụ Herbert Nitsch ka ọ ghara ịkụ ihe ndekọ ụwa na-akwụ ụgwọ n'otu Depdị Omimi nke 214 mita. Nwoke a jiri naanị otu ume swam na ọkwa ahụ. Ma ntakịrị ntakịrị, na 332 mita, anyị nwere ndekọ ụwa na ndakpu mmiri, nke nwoke ọzọ aha ya bụ Ahmed Gabr setịpụrụ.
Ọ bụrụ na ọ zụlitere narị anọ na iri ise ọzọ, ọ gaara adị elu dịka Buildinglọ Ọchịchị Alaeze ma ọ bụrụ na ọ dị n'okpuru mmiri. Obere n'ihu, mita 500 dị n'okpuru ala ahụ, anyị ruru oke omimi mmiri nke whale na-acha anụnụ anụnụ, ihe ndị kachasị ukwuu na mbara ala yana oke oke okpuru mmiri Nuclear US Seawolf Class. Anyị nwere ike ịnwe oke omimi miri emi nke eze penguins na 535 mita n'okpuru nrụgide mmiri.
Na ọkwa a n'okpuru ala, nrụgide mmiri a na-enye mmadụ ma ọ bụ penguins ahụ ga-abụ ihe nhata nke pola bear na-anọ na nkeji iri na ise. N'ịga n'ihu, na 830 mita, Burj Khalifa na Dubai ga-abụ ụlọ elu kachasị elu nke Dubai na ụwa. Ozugbo anyị nwetara mita 1,000 n'okpuru ala, anyị na-amalite ịbanye na mpaghara egwu.
Ìhè si n’elu agaghị enwe ike ịgafe ebe a, yabụ, ọchịchịrị na-adịgide adịgide kpuchiri akụkụ ndị ọzọ nke oké osimiri dị n’okpuru, mmiri ị ga - enweta n’ebe a ga - adị ka ọ bụrụ na ị kwụ n’elu ụwa. Venus nke pụtara na ị ga-anwụ ngwa ngwa. Na ọkwa a nke oke osimiri ị ga-akụkwa nnụnnụ mmiri buru ibu ma ọ bụrụ na mmiri adịghị egbu gị. Na mita 1,280 anyị ruru omimi mmiri mmiri nke akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ.
N'ịga n'ihu na mita 1,828 anyị ga-erute n'akụkụ miri emi nke Grand Canyon, ọ bụrụ na ọ bụ mmiri n'okpuru anyị, anyị ga-amalite ịhụ ụfọdụ n'ime ihe ndị ọzọ dị egwu n'oké osimiri, dịka aha ọjọọ Black Dragonsih, anụ ọhịa na-eri anụ nwere afọ. nke na-anaghị ekwe ka ìhè site. Nke ahụ kwuru, ebe ọ bụ na anyị nọ n'okpuru mmiri n'ọchịchịrị zuru oke n'oge a, nke a bụ naanị ụzọ ị ga-esi jiri tọọchị hụ ihe a. N'ịga n'ihu ntakịrị, na mita 2,250, anyị ga-eru oke omimi ebe ma sperm whale na oke egwu na-acha skwọid dọrọ.
Mmiri spam na-enwekarị akara na ọnya na ahụ ha site na agha na octopus dị egwu, nke nwere ike ime na omimi ndị a dị egwu. Ndị squid n’onwe ha nwere ike itolita ruo mita iri na anọ n’ogologo wee ruo kilogram 750, jiri anya ha nha ndị nwere efere na mma n ’agụba n’etiti ụlọikwuu ha. Yabụ ee, jisie ike n’ebe ahụ.
N’ebe dị anya na 3,800 mita anyị hụrụ mkpọmkpọ ebe nke RMS Titanic. Na obere n'ihu na 4,000 mita anyị na-amalite ịbanye na mpaghara nke abyssal nke oké osimiri, mmiri na-agbada ebe a na-eju 11,000 pound kwa square inch. Ma enwere ọtụtụ ihe dị iche, ndị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọbịa na-ebi n'ime omimi ndị a, dịka Mkpịsị Aka Fing, Azụ Azụ, na Azụ Azụ.
Gbadata na mita 4,267 bụ oke omimi nke oke osimiri nke ị ga-atụ anya ịdaba na ala. Ma enwere akụkụ oke osimiri nke miri emi nke ukwuu karị. Mbibi nke ụgbọ mmiri Bismarck, nke dara na Agha IIwa nke Abụọ, dị mita 4,791.
Na na ala ala, na 6,000 mita, mpaghara Hadal malitere. Aha ya maka Hades n'okpuru ụwa n'onwe ya. Nrụgide mmiri dị omimi a nwere ike ịbụ ugboro 1,100 ihe ị ga - ahụ n’elu, ihe dịka enyí na - adaba na stampụ akwụkwọ ozi ma ọ bụ otu onye na - eri 50. kwekọrọ na Boeing 747 jumbo jets.
N'okpuru ogbu mmiri ndị a, na-enweghị nchebe mpụga, a ga-akụpịa otu ozugbo. Ma, a ka nwere ndụ ebe a n'ụdị dị iche iche. Na mita 6,500 anyị rutere oke omimi nke DSV Alvin, ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri na-ewu ewu nke nyere aka na nchọpụta nke Titanic, nwere ike ịmaba.
N'ịga n'ihu, na 8,848 mita n'okpuru ala ahụ, anyị eruwo elu nke Mt. Everest, ọ bụrụ na ọ bụ isi ala na n'okpuru mmiri. Ma mgbe ahụ gafere nke ahụ, na 10,898 mita, anyị ruru omimi nke James Cameron ruru na 2012 n'oge ọrụ miri emi nke ịma aka dị omimi.
Ka osi di, ihe kachasi omimi n’ime oke osimiri nke mmadu metutara bu n’afo 1960 mgbe umu nwoke abuo aha ha bu Don Walsh na Jacques Piccarda ruru okpuru mmiri di 10,916 na okpuru mmiri ha. O were ha awa ise tupu ha agbada n’oké osimiri ahụ ruo n’ebe miri emi. Naanị ha nọrọ naanị nkeji iri abụọ tupu windo akụwa ma ha apụta ọzọ.
Naanị ntakịrị ntakịrị gbadata mita 10,972 ma anyị eruola ogo elu nke ụgbọ elu. Yabụ ọ bụrụ na ị lepụgo anya na windo wee lee ala mgbe ị na-efe efe, nke ahụ bụ ezigbo mmetụta maka etu miri emi nke abyss anyị nọ, n'ụzọ doro anya mgbe anyị ruru mita 10,994 anyị rutere na ala nke ọma- Oké Osimiri a maara ama, ihe ịma aka dị omimi, ebe a na maapụ a, naanị ihe dịka 300 kilomita na ndịda ọdịda anyanwụ Guam Island. Agbanyeghị, ekwenyere na enwere akụkụ miri emi karị nke oke osimiri nke achọpụtabeghị.
Ọ bụghị rue 1997 ka a hụrụ omimi Sirena na omimi nke 10,732 mita, na-eme ka ọ bụrụ ebe miri emi nke miri emi nke miri emi. Naanị ihe dịka 5% nke oke osimiri ahụ ka edepụtara nke ọma, ndị ọzọ 95% bụ ihe omimi ugbu a. O nwere ike ịbụ naanị obere oge tupu a chọta mpaghara miri emi karị nke oke osimiri anyị.
Na onye maara ihe anyị nwere ike ịchọpụta ebe ahụ. Daalụ maka iwepụtara oge iji lelee edemede a, ọ bụrụ na ịchọrọ ịdebe oge na isiokwu ndị dị ka nke a n'ọdịnihu, ịnwere ike ịdenye aha na ọwa m site na ịpị ebe a. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ile isiokwu ndị yiri ya ka ọ dị ugbu a, e nwere ụfọdụ edemede okenye ebe a n'aka ekpe.
Daalụ ọzọ maka ilele edemede a, anyị ga-ahụkwa gị oge ọzọ.
Mita ole ka dị kilomita?
Ke ibuotikọ emi, anyị ga-elekwasị anya na ụfọdụ ọsọ nkeji nke anya na-enyere gị aka inwe ụfọdụ nsinammuo banyere ha nha na. iji mepụta ụdị ihe ha tụrụ.
Dị ka eleghị anya ị maara, ogologo bụ otu akụkụ buru ibu na-akọwa etu ọ dịruru etiti isi abụọ. A na-eji ọtụtụ okwu dị iche iche dịka okwu maka ọdịiche, dị ka '' Ogologo ',' Elu '. ”,“ Obosara ”ma ọ bụ“ Omimi ”.
Okwu ị na-ejikarị dabere na otu esi edozi ihe n'akụkụ gị. Iji maa atụ, ọ bụrụ n ’tụọ ụzọ dị n’otu akụkụ gaa n’akụkụ nke ọzọ, ị nwere ike ịkpọ‘ obosara ’a. , ma ọ bụrụ na ị na-atụ ogologo na ala, ị nwere ike ịkpọ ya 'elu'.
Mana agbanyeghị okwu ọbụla iji were dị anya, otu nkeji dị otu a. Ma dị ka anyị mụtara n’isiokwu gara aga, e nwere ọtụtụ ebe dị anya anyị nwere ike iji mee ihe, dị ka mita, kilomita, ma ọ bụ millimeta. metrik nkeji, dị ka ụkwụ ma ọ bụ sentimita asatọ, nke anyị nwekwara ike iji.
Ma gịnị kpatara nkeji dị iche iche? Echere m ọ gaghị adị mfe karị ma ọ bụrụ na anyị ahọrọ otu ebe dị anya ma jiri ya mee ihe mgbe niile? Anyị nwere ike
Mana isi ihe mere anyị ji nwee ngalaba dị iche iche ịhọrọ bụ na nha nke ihe anyị chọrọ ịtụ dị iche iche. Fọdụ dị ezigbo ibu, ebe ndị ọzọ pere mpe nke ukwuu na ị nweghị ike ịhụ ha. A na-akpọ ụdị dịgasị iche iche nke ogo dị iche iche, ma ọ na-enye aka ịhọrọ otu ihe atụ nke dabara n'ọtụtụ ihe nke ọma.
Nke a bụ ihe m na-ekwu maka ya ọ bụrụ na m kpebie ịtụle ogo m na millimeters, ndị a bụ obere nkeji hà nha.
Aga m adị ihe dị ka milimita 1,980 n'ogologo! Ma ọ bụ ezie na nke ahụ bụ nha ziri ezi, ọ bụ ụdị nnukwu ọnụ ọgụgụ na-eme m ka m dị ogologo karịa m n'ezie, ekpebiri m ịtụle ịdị elu m na nnukwu nha, na kilomita, naanị m ga-abụ 0.00198 kilomita. Nke ahụ bụkwa nha ziri ezi, mana ọ bụ ọnụọgụgụ pere mpe nke na-eme m ka m pere mpe! Ma gịnị ma ọ bụrụ na m họrọ otu nke dị n'etiti, dịka obere mita ochie? Mita dị ogologo dị ka mkpisi a, kpọọ ya aha m masịrị ya 'mkpisi mita'.
Ma ọ bụrụ na m ga-eji ya tụọ elu m, m ga-adị 1.98 mita, nke bụ naanị 2 mita ihere, ọ ga-adị mma ịsị na m ihe dịka 2 mita n'ogologo nke bụ ọnụọgụ mara mma dị mfe iji rụọ ọrụ. You na-ahụ uru dị iche iche dị iche iche maka ịlele anya? Nwere ike ịhọrọ otu nke dị nso na ọnụ ọgụgụ nke ihe ịchọrọ ịlele ka ọnụọgụ ị nweta wee nwee ike ịkọwapụta ma dị mfe karị iji rụọ ọrụ.
Agbanyeghị, nke ahụ pụtara na ọ dị gị mkpa ịmata nkeji dị iche iche ka ị nwee ike ịhọrọ nhọrọ, ọ bụ eziokwu? Ya mere, nke ahụ bụ ihe anyị ga-elekwasị anya maka ihe ndị ọzọ nke isiokwu a. Karịsịa, anyị ga-amụta maka mpaghara ọdịnala 4 nke a ka na-eji na America iji tụọ ogologo: sentimita asatọ, ụkwụ, yaadị na kilomita. Na mgbe ahụ, anyị ga-ahụ etu ndị a jiri tụnyere mpaghara metrik anọ kachasị ewu ewu maka ịtụ anya: millimeters, centimeters, mita, na kilomita.
Ka anyi jiri inch bia malite. Otu anụ ọhịa dị ihe dị ka obosara a, nke dị nso na obosara nke anya mmadụ, ma ọ bụ ma eleghị anya obosara nke mkpịsị aka gị ma ọ bụrụ na ị nwere mkpịsị aka ukwu. Otu inch bụ ezigbo ọnụọgụ iji chọpụta ihe ndị anyị na-ejikọ ọnụ.
Dịka ọmụmaatụ, bọl ping-pong dị ihe dị ka sentimita na ọkara n’obosara, ekwentị m dịkwa ihe dị ka sentimita isii n’ogologo, pensụl a na-enwetabeghịkwa dị ihe dị ka sentimita asatọ n’ogologo. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị iji ihe dị obere karịa anụ ọhịa dị ka anụ ọhịa anụ ọhịa ma ọ bụ ọkara ọkara nke anụ ọhịa. Anyị ga-amụtakwu banyere ụmụ irighiri ihe nke anụ ọhịa n'isiokwu n'ọdịnihu mgbe anyị na-ekwu maka gauges dị ka ndị ọchịchị na teepu.
Ọ dị mma, mana gịnị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịtụ ihe buru ibu karịa inch ụgbọ ala? Anyị ka nwere ike iji sentimita asatọ wee jiri otu nnukwu ihe.
Ma ọ bụ na anyị nwere ike iji nnukwu mpaghara akpọrọ 'ụkwụ'. Kwụ bụ otu ogologo anya dị ka sentimita iri na abụọ a tụkọtara site n'otu nsọtụ ruo na nke ọzọ. Yabụ na ọ gbasara ogologo ogologo ahụ ụfọdụ ihe ndị ị maara nke gbasara ogologo ụkwụ bụ nke ọma ụkwụ gị maka otu ihe.
N'ezie, ndị dị iche iche nwere ụkwụ dị iche iche, ma ọtụtụ ndị nwere ụkwụ ụkwụ na-erughị otu ụkwụ, mana ogologo ogologo akpụkpọ ụkwụ bụ ezigbo echiche nke ụkwụ. ọtụtụ ụkwụ na anya bụ. Ihe ndi ozo di ka ukwu gbara ukwu gunyere: sandwich nke nwere ukwu-ukwu, ma obu karama mmiri, ma obu ihe nkpuchi ato.
Akwụ bụ ihe eji arụ ọrụ iji tụọ ihe dịka ogo mmadụ
A na m eme ụkwụ isii. Ma obu obosara nke desktọọpụ nke m dị ihe dịka elekere isii.
Ma obu ogologo ugbo ala nke m di ihe dika ukwu ano.
Ma gịnị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele ihe buru ibu karịa ụkwụ dị ka egwuregwu egwuregwu? Ọfọn, nke ahụ bụ ihe yad bụ maka.
Otu yad bụ Englis h unit nke otu ihe ahụ dịka otu 3 ụkwụ na-etinye n'otu njedebe. Otu yad dị ihe n'ogologo ahụ. N'ozuzu, a naghị eji yaadị eme ihe dị ka ụkwụ, mana otu ebe a na-eji yaadị eme ihe oge niile bụ na bọọlụ America.
Ogige egwuregwu bọọlụ America dị yaadị 100 ogologo n'etiti mpaghara ngwụcha. A na-ekewa 100 eserese ahụ na obere nke 5 yad ọ bụla. Yabụ ị nwere ike ịlele ụfọdụ anya dị oke mma na ụkwụ na yaadị, mana gịnị ma ọ bụrụ? You chọrọ otu ngalaba ka ukwuu? Miles bara uru mgbe ahụ.
Otu kilomita bụ yaad 1,760. Nke ahụ bụ ebe ị ga - enweta ma ọ bụrụ na ị kwụnye bọọlụ bọọlụ 17.6, nke bụ ogologo oge; otu maili buru ibu karịa nkeji atọ ndị ọzọ anyị lere anya.
Ọ bụrụ na nke a bụ anụ ọhịa mgbe ahụ nke a bụ ụkwụ na nke a bụ yad mgbe ahụ nke a bụ mile! Ebe ọ bụ na kilomita dị ogologo, a na-ejikarị ya atụ ogologo dị n'etiti ebe dị iche iche n'ụwa na etu ndị mmadụ si eme njem.
Dịka ọmụmaatụ, ebe dị anya site na New York City ruo Washington DC dị ihe dịka 200 kilomita (dị ka usoro usoro ijiji), na ebe dị anya site na US East Coast ruo West Coat (ma ọ bụ oke osimiri ọ bụla ịchọrọ ịkpọ ya) karịrị 2,600 kilomita! N’ezie, ị nwere ike iji ọtụtụ kilomita tụọ obere anya, mana ọ ga-abụ ntakịrị nzuzu ịgwa enyi gị na ị bụ 0,000994 kilomita. Mana gaba ma oburu na ichoro.
Ọ dị mma, nke ahụ na-elekọta ngalaba 'ọdịnala' anọ dị mkpa ugbu a ka anyị lelee mpaghara ụzọ anọ kachasị metric (ma ọ bụ SI) nke ndị sayensị na ọtụtụ mba họọrọ.
Anyị na-amalite site na otu akpọrọ centimita. Otu anụ ọhịa dị obere ọ bụ ihe gbasara obosara nke obere mkpịsị aka gị, ma ọ bụ dayameta obere mabul.
Ọ bụrụ na i jiri sentimita tụnyere nke anụ ọhịa, ị ga-achọpụta na ọ ga-ewe ihe dịka sentimita abụọ na ọkara ka otu inch (2.54 centimeters bụrụ nke ziri ezi). Yabụ, sentimita asatọ bụ ezigbo nkeji maka ịlele ihe ị na-emekọrịta.
Igwe batrị a dị ihe dị ka sentimita 2 n’ogologo, bọlbụ a na-agba agba dị ihe dị ka sentimita 6.5 n’obosara, na ọkụ ọkụ a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ sentimita 23 n’ogologo. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele ihe pere mpe karịa inch? Ọfọn millimeters nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ.
Ihe milimita bụ otu ụzọ n'ụzọ iri nke centimita. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na i were otu sentimita wee kee ya n’ime akụkụ 10 ha nhata, akụkụ nke ọ bụla ha ka otu millimeta. Otu milimita bụ ihe dịka obosara nke obere ndanda ojii, yabụ millimita dị mma maka ịlele obere ihe dị ka obosara nke mkpụrụ sunflower ma ọ bụ oke nke ama.
Ọ dị mma, mana gịnị ma ọ bụrụ na anyị kwesịrị ịlele ihe buru ibu karịa inch? Enweghị nsogbu, anyị nwere ike iji naanị mita. A mita bụ otu nke dị anya nke dị ogologo oge a
Ọ dị ka mbara ezi n’ogologo, ọ bụghị ya? Ọ na-apụta na otu mita dị obere karịa otu ogige. banyere 10% ogologo.
Mana ihe kachasị mkpa gbasara otu mita bụ na ọ bụ ogologo ụzọ ị ga - enweta ma ọ bụrụ na ị kwụ n’ahịrị 100 centimeters. Ee, centimita 100 dị ka mita 1, nke pụtara na otu centimita bụ otu narị mita. Mita dị oke mma maka ịlele anya dị ka ịdị elu nke ụlọ.
Nke a dị mita 381 n’ogologo. ma ọ bụ ogologo gburugburu ọsọ agbụrụ nke bụ 400 mita.
Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele anya dị anya karị, ịnwere ike iji kilomita. Otu kilomita bụ ụzọ ị ga-enweta ma ọ bụrụ na ị were mita 1,000 kpọmkwem na ahịrị. Ọ bụ ogologo ụzọ.
Ọ dị ogologo karịa mpaghara ndị ọzọ metrik anyị hụrụ bụ milimita, nke a bụ centimita, nke a dịkwa mita mgbe nke a bụ kilomita! Dịka ị pụrụ ịhụ, otu kilomita dị n'ogologo na ogo ya dị ka kilomita mana maịlị dịkwa ogologo karịa otu kilomita, ọ na-ewe obere karịa kilomita iji bụrụ otu ụzọ ahụ dị ka mile.
Ma n'ihi na ha buru ibu dị ka kilomita, kilomita s ka a na-ejikarị atụ ogologo dị n'etiti ebe dị iche iche n'ụwa ma ọ bụ ọbụlagodi na mbara! Dịka ọmụmaatụ, ọ dị ihe dịka 4,000 kilomita site n'ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ nke Australia ruo n'ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ na ọ dị ihe dịka 384,000 kilomita site n'ụwa ruo ọnwa! Ọ dị mma, ugbu a na ị nwere echiche ka mma banyere oke nke ọdịnala ndị kachasị ewu ewu na nke metric nke dị anya, ka anyị mee ntụnyere n'akụkụ iji nweta mmetụta ka mma maka otu mpaghara ndị a si metụta ibe ha. Ozo, ka anyi jiri inch bia malite. Anyi amutala na otu inch dikwa ogologo dika centimita 2.54, nri? Ya mere, ole milimita ga-aha ka inch? Ugbu a, na centimita ọ bụla bụ kpọmkwem 10 millimita, ọ ga-abụrịrị na anyị ga-amụba 2.54 na 10 ma anyị hụrụ na anụ ọhịa ahụ bụ 25.4 millimeters! Ma ugbu a, anyị na-etinye ụkwụ.
Anyị ma na ụkwụ dị sentimita iri na abụọ, nke pụtara na ụkwụ dị okpukpu iri na abụọ n’ogologo. Ya mere ole sentimita asatọ bụ ụkwụ? Ọ dị mma enwere 2.54 cm na sentimita asatọ, ọ bụrụ na anyị amụba na site na 12 anyị maara ole sentimita asatọ dị n'ogologo, na-eji mgbako m tụkwasịrị obi: 2.54 x 12 = 30.48, ya mere ụkwụ bụ kpọmkwem 30, ndị a bụ ntụgharị ziri ezi n'etiti sentimita, sentimita, na ụkwụ, mana gịnị ma ọ bụrụ na ihe niile ị chọrọ bụ atụmatụ ma ọ bụ nha nha, nke bụrụ naanị iburu n'uche na anụ ọhịa dị ihe dịka 2.5 cm na ụkwụ ihe dịka 30 Kama nke ahụ, ka anyị mee nyocha ọzọ ngwa ngwa, bido na 10 centimeters.
Ọ bụrụ na ị nwere 10 centimeters, ọ dị mfe ịhụ na nke a bụ 100 millimeters ebe ọ bụ na centimita ọ bụla bụ 10 millimeters (10x10 = 100). Ma olee otú otu anya ga-adị n'ogologo? Otu sentimita n'ogologo karịa sentimita, ọ ga-ewe ihe dị ka sentimita 2,5 ka ọ bụrụ 1 inch, ya bụ? Yabụ ọ bụrụ na anyị kee 10 centimeters na otu 2.5 (nke ya na ịkewaa 10 na 2.5), anyị na-eme otu 4 nke nha nha.
Nke ahụ pụtara na sentimita 10 dị ezigbo nso na 4 sentimita asatọ. Ihe kpatara na ọ dị ezigbo nso bụ na anyị jiri atụmatụ 2.5 cm kwa inch karịa ezigbo uru nke 2.54.
Kama, oburu na anyi kee 10 rue 2.54, anyi ga ahu na 10 cm dika nke 3.937 inches.
Mana 4 bụ atụmatụ dị ukwuu, ma dịkwa mfe icheta, 10 cm dị sentimita 4. Ugbu a na anyị ejirila obere nkeji tụlee, ka anyị lelee ndị buru ibu anya. Anyi amutala na otu mita ra ka 10% kariri otu yard, ma obu ihe dika yad 1.1.
Nke ahụ bụ ezigbo atụmatụ, mana karịa karịa (ruo ebe iri atọ), otu mita bụ mita 1,094. Otu mbara elu dị mita atọ, nke pụtara na otu mita gafere ụkwụ 3. Ego ole? Ọfọn, ụkwụ ọ bụla dị na mbara ihu bụ sentimita iri na abụọ, yabụ otu ogige bụ sentimita iri atọ na isii (ebe 3 x 12 = 36).
Atụmatụ anyị bụ na otu mita ka 10% buru ibu karịa otu mbara, yabụ gịnị bụ 10% nke 36 sentimita asatọ? Ee 3.6 sentimita asatọ.
Na mgbe anyị gbakwunye na 36 sentimita asatọ ọ pụtara na mita dị nso na 39.6 sentimita asatọ (ma ọ bụ sentimita iri anọ ma ọ bụrụ na anyị agbakọta ntakịrị). Nke ahụ dị mma n'ihi na cheta na anyị mere atụmatụ na 10 cm dị ihe dịka sentimita anọ.
Ọ dị mma, otu mita dị okpukpu iri dị ka sentimita iri na sentimita iri anọ na sentimita iri anọ. Ya mere ezigbo atụmatụ siri ike nke otu mita bụ na ọ dị ihe dị ka sentimita 40 n'ogologo. Na mmechi, ka anyi tulee kilometa na mile.
Otu kilomita dị ogologo karịa otu kilomita; n’ezie, ọ na-ewe ihe dịka kilomita 1 ka ọ hara otu mile. Ọnụahịa ziri ezi bụ 1.609344 nke pụtara na otu kilomita bụ naanị ihe dịka 62% nke anya nke otu mile.
Greatzọ dị mma iji cheta ọdịiche dị n'etiti kilomita na otu kilomita bụ ịmụba ma 10 ma cheta na 10 kilomita dị ihe dịka otu kilomita 10. Eziokwu a na-atọ ụtọ nwere ike ịba uru na njem njem gị ọzọ
Oh, anyị kwesịrị ịnọ n'ogige ahụ dị kilomita iri. 16 kilomita!? Anyị agaghị ebe ahụ !! Oh, zuru ike n'ebe ahụ, nke ahụ bụ naanị 10 kilomita, Ee !!! Ọ dị mma na nke a bụ isi mmalite nke ngalaba ndị a na-ejikarị atụ anya, na-atụ anya na ọ na-enye gị otu echiche ka mma banyere etu akụkụ nke ọ bụla dị, otu ngalaba dị iche iche si emetụta ibe ha na ụdị ihe ha bara uru maka atụ. Ọzọkwa, enweghi ọtụtụ mmega ahụ maka ngalaba a, mana ha ga - enyere gị aka icheta mmekọrịta dị n'etiti ụfọdụ n'ime ngalaba ndị a dị mkpa.
Dị ka mgbe niile, daalụ maka ikiri Math Antics, anyị ga-ahụ gị oge ọzọ. Mụtakwuo na www.mathantics.com
Kedu ebe mita 2000 gbara ọsọ na kilomita?
.B.mailibụ 1609.344mita.Ọgọst 2 2019
Kedu ihe na-eme YouTube, m, Rashad na taa. Aga m egosi gị otu esi eku ume nke ọma. Mgbe m na-agba ọsọ, ọtụtụ mmadụ ga-atụgharị m wee jụọ m otu esi agụ ihe n'ụzọ ziri ezi mgbe ị bụ na yabụ taa? Aga m akọwara gị ya, mana ọbụghị naanị m ga-akọwara gị nke a.
Aga m enye gị mmega ahụ ga - enyere gị aka ịghọta etu esi eme nke a. Mgbe ịmechara mgbatị ahụ a, ị ga - ama etu esi eku ume mgbe ị na - agba ọsọ, kụrụ bọtịnụ yiri ya, m ga - edebanye aha na m Rashad ị bụ eze na - ebughi n'ihu wụbata n’isiokwu Ọ dị mma unu onwe unu etu esi eku ume nke ọma mgbe anyị na-agba ọsọ ka anyị gafee mmega ahụ ọsọ ọsọ ugbu a, nke a bụ mmega ahụ ga-enye gị nghọta, nke ga - enyere gị aka ịghọta etu esi eku ume mgbe ị dị njikere. Ma ị ga-aghọta ihe omume a ntakịrị, ọbụlagodi mgbe ị nọ na ekwentị ma ọ bụ nọrọ na kọmputa gị um naanị na-eku ume site na imi gị, mechie ọnụ gị ma kuo ume site na imi m ga-emere gị ya, ị dị mma? Ugbu a naanị ikuku site n'ọnụ gị? Ebee ka ị na-eku ume n'ọnụ gị ugbu a na ekwentị gị ma ọ bụ na kọmputa gị, ị na-eche ihe dị iche na-esote? Achọrọ m ka ị kuo ume n'ọnụ gị na imi, ọ dị mma? Ọ bụ ụdị ihe dị ịtụnanya mgbe ịnwale iku ume n'otu oge.
Amaara m na ị nwere ike ịbụ oge oyi dị ka ị kwuru ma ọ bụrụ na imi gị chọrọ inyere ọnụ gị aka iku ume ka ị na-agba ọsọ wee were ya dị mfe, mana ị naghị anwa iku ume n'otu oge, ọ dị mma ka ọnụ gị na imi gị, ngosiputa nke m ga egosiputara gi, ga enyere gi aka ghota mmega a n’ebe a n’onwe ya, ga-egosi gi otu esi eku ume. Ihe m ga - eme ugbu a bx otu n. Ime okirikiri. Nke ahụ bụ ihe ị ga-eme na njedebe nke isiokwu a. Ọbụghị naanị na ị ga - aghọta otu esi eku ume nke ọma site na nkọwa okwu, mmega a ga - egosi gị na ị dị mma, naanị mmadụ na - achị gị ọchị.
Ka anyi mee ya ugbua ka anyi kpoo oku tupu ime nke a. Abiala na egwu ahu otu ubochi, Rashad kwuru, mee ihe mgbatị a ka imuta ka esi eku ume nke oma. mbaEwepu aka tupu ijeghari otua, odikwa? Enweela m obi ụtọ, ka anyị bido ebe a, unu nwalee ihe m chọrọ ka ị mata ma ghọta na iku ume bụ ọrụ ahụ nke ị na - ejighị ike ya, iku ume na - ejikarị usoro ụjọ ahụ gị. na ị naghị eku ume nke ọma, ị kwesịrị ịpụ ma mee mgbatị ahụ a ka ị na-achọ iku ume ikuku oxygen dịka o kwere mee ka akwara gị nwee ume zuru oke n'ụbọchị nkịtị anyị zuru ike, anyị na-anọkarị naanị obere oge, ma ama m na mgbe anyị na-agba ọsọ na obi anyị na-aba ụba ọ na-aka arụ ọrụ nke ọma ka anyị jiri imi na ọnụ anyị ọnụ.
Anaghị m ekwu na ị na-eku ume n'ọnụ gị yana n'ọnụ gị n'otu oge Inwe iku ume gị imi Ma m na-ekwu na ọ bụ ezigbo na imi gị kwesịrị iji rụọ ọrụ ọnụ ka ị na-eku ume ma na-apụ. Know mara na m na-ekwu na oghere abụọ maka iku ume na iku ume dị mma karịa naanị otu. Ihe niile na-ada ụda ugbu a, mana ikwesighi iche banyere ya.
Iku ume iku ume nke usoro akwara akpaka gị na-achịkwa, ọ dị mma? Ya mere, hapụ ka ahụ gị kuru ume ka ị gbaa ọsọ? Emechara m ọsọ ọsọ 400 mita. Ugbu a achọrọ m ka ị mee otu ihe ahụ mgbe ị rụchara ọsọ ọsọ 400 mita. Will gaghị enwe ike ịchịkwa iku ume gị na ị ga - ewe oge dị ukwuu iji ghọta ma hụ otu ị si eku ume mgbe ị na - echeghị banyere ya.
O lee otu m kwesiri isi eku ume, ị hụrụ ihe m na-ekwu? Ekwesịrị m ịchịkọta onwe m ka m ghara ịkọwara gị ihe a. Ugbu a na ngwụcha mgbatị ahụ, ị ​​ga-enwe mmetụta ka ị na-eku ume nke ukwuu mgbe ị na-eku ume onwe gị na njedebe nke 400 ahụ ma jiri ụbụrụ gị kama iche echiche banyere ya oh ike gwụrụ m nke a maka nke abụọ, mara ma wee chee echiche banyere ya ọ, dị ka nke gị Ahụ na-eku ume mgbe ị naghị achịkwa ya, ị nweghịkwa ya Cannweghị ike iche maka ya n'ịchịkwa, ị hụrụ ihe m na-ekwu Ya mere, bịa site na uche wee hụ otu ị si eku ume wee dee ihe, ọ dị mma ? Mee ederede uche dị ka oh iku ume m ugbu a dị ka nke a mgbe ike gwụrụ m na enweghị m ike iche maka ya Ma mgbe ahụ ị ga-ahụ otu esi eku ume nke ọma iji nweta ikuku oxygen n'ihi na mgbe ị nọ na 400 mita Ozugbo ị ' Emechara na-agba ọsọ, ahụ gị ga-anwa iku ume iji nwekwuo ike na akwara. Ugbu a nke ahụ bụ ụzọ kachasị arụ ọrụ, ekwula, na-eku ume ike mgbe ị na-agba ọsọ, na-achịkwa iku ume gị, mana were usoro ahụ n'uche, mee onwe gị naanị ederede banyere usoro ahụ gị na-eji, ọ dị mma? Anaghị m ekwu na ị nwere ike ịnọdụ ala ebe ahụ ma na-eku ume ike mgbe ị na-agba ya dị ka ị rụchara otu narị afọ anọ na-agba ọsọ naanị kwuo otu ahụ gị si eku ume etu o si eku ume n'ọnụ ya wee mezie imi ya iji nyere aka mee ka ị ghọta na, na mgbe ahụ mee ya dị ka nke ọma dị ka ị na-eme mgbe ị na-agba ọsọ, na nke ahụ bụ otú ị na-eku ume nke ọma mgbe m na-agba ọsọ m dị nnọọ ike gwụrụ unu ụmụ okorobịa ndị ọzọ na-agba ọsọ na isiokwu na-abịa n'oge na-adịghị anya kụrụ bọtịnụ dị n'okpuru n'okpuru ịhapụ ikwu You nwere echiche ederede na achọrọ m ka m kwenye na ọ bụ ezigbo echiche na isiokwu m na-esote na-agba ọsọ bụ ihe dị ka mita 400 na-agba ọsọ ka ee, lee gị n'isiokwu na-esonụ
Kedu kilomita ole mebere kilomita 1?
Ya mere2000 mitabụ ihe dịka 1.243Puku kwuru puku.
Egwuregwu bọọlụ ole dị mita 500?
500 mitabụ 1640 ụkwụ ma ọ bụ ihe dịka 546 yards. Ya mere ọ ga - abụ ihe dịka 5 na ọkaraubi bọọlụn'ogologo.Jenụwarị 13. 2016 Nọvemba
Ogige egwuregwu ole dị mita 300?
Nwere ike ime mgbanwe ntụgharị si A Canadianbọl bọldị 100mitaogologo na 59.4mitan'obosara ebe onye Americaubibụ 91.4mitaogologo na 48.8mitaobosara.300 Mita= 984.25197 ụkwụ (mechie ruo 8 digits) Ngosipụta dị ka. Mita 1 dị ka 1mita, ma ọ bụ 0.010936132983377bọl bọl.
Kedu ala ala dị mita 1000?
Na1000 menwere 0.62137119 mi. Nke bụ otu ihe ahụ na-ekwu na1000 mitabụ 0.62137119 kilomita.
Kedu ala ala dị mita iri ise?
50 mitahà nha ụkwụ 165 ma ọ bụ 5 ATM. 100mitaya na 330 ụkwụ ma ọ bụ 10 ATM. Ogba 200mitahà nhata 660 ụkwụ ma ọ bụ ATM iri abụọ. A na-eche nche ndozi mmiri na ISO, ma kpọọ ya 150 ruo 200mita, nke dị n 'omimi miri nke 500 ruo 600 ụkwụ.
Ọ dị kilomita 1 n'ogologo?
Ogologo na oge ndi mmadu
kilometa: TOkilometabụ 0,62 kilomita, nke bụkwa 3281.5 ụkwụ, ma ọ bụ 1000 mita. Ọ na-ewe 10 ruo 12 nkejijee ijena-agafeghị oke ije ije. Ọ na-ewe 15 ruo 20 nkejijee 1mile na agafeghị oke ije. 3K: kilomita 3 dị ka kilomita 1.85, ma ọ bụ ụkwụ 9842.5, ma ọ bụ obere ihe na-erughị kilomita 2.
Kilomita ole ka m kwesịrị ije n’ụbọchị iji felata?
Yabụ, ijiidaOtu paụnd kwa izu - ihe mgbaru ọsọ siri ike, dịka ndị ọkachamara si kwuo - ọ ga-adị gị mkpaọkụKalori 500 aụbọchị. 'Nke ahụ pụtara gịkwesịrịzubere maka ihe dị ka 10,000 nzọụkwụ aụbọchị, nke dị na isePuku kwuru puku.Eprel 29 2020